शान्ति चौधरीले जन्माइन् चार हात, चार खुट्टा भएकाे अनौठो बच्चा – Tharuwan.com
टीकापुर अस्पतालमा अनौठो नवजात शिशुको जन्म भएको छ। जानकी गाउँपालिका–३ लायकपुरकी २२ वर्षीया शान्ति चौधरीले अनौठो शिशु जन्माएकी हुन्।
नवजात शिशुको चार हात, चार खुट्टा र २ मेरुदण्ड रहेको छ। मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नरेन्द्र कुमार खनालले राति ११ बजेतिर शिशु जन्मिएको बताए। नवजात शिशु जिवितै रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
परिवारका अनुसार आमालाई सोमबार दिउसो ३ बजे व्यथा लागेको थियो। उनलाई राति १० बजे मात्रै अस्पताल पु-याईएको थियो। अस्पताल पुर्याएको केही समयमा नर्मल डेलिभरी भएको डा. खनालले जानकारी दिए। यो उनको पहिलो सन्तान हो।
– योगेश रावल
34छुटाउनु भयो कि देश